iTunes Remote inova yakachengeteka pamwe neyakagadziridzwa nyowani | IPhone nhau
iTunes Remote inogadziridzwa nekuwedzera kuvimbiswa kwezvinhu zviviri
Imwe yemapurogiramu mazhinji eApple anowanikwa paApp Store iri iTunes Remote. Zvinogona kunge zvisinganzwike zvinozivikanwa kune vakawanda, asi iko iko iko iko kutitendera iyo inotibvumidza isu kudzora iTunes kubva chero kupi mumba medu: kudzora kutamba, kufambira mberi nziyo, kutsvaga raibhurari, kugadzira playlists ... zvakaita sedare remota. Chinodiwa chete ndechekuti ubatanidzwe kune imwecheteyo netiweki yeWi-Fi sekombuta ine iTunes uye kuve neIOS 9 kana gare gare pane yedu iDevice.
iTunes Remote yakagadziridzwa nekuwedzera chishandiso chekuchengetedza icho chingangonzwika kujairika kune mese: zviviri-chokwadi chechokwadi, chengetedzo plus iyo ichaita kuti isu tivimbe nedare rekuongorora kana nhamba yefoni kuti tiwane iko kunyorera.
iTunes Remote inova yakachengeteka
Iko kushanda kweTunes Remote kunoenderana nebasa «Goverana kumba»Kubva kuTunes uye inotibvumidza kuwana iro raibhurari yese pakombuta yedu kubva kune mudziyo une app yaiswa. Uye zvakare, iro basa AirPlay, yatinogona nayo tumira mimhanzi yedu kuma speaker inoenderana nebasa racho. Kune rimwe divi, iyo app inotibvumidza kuti tigadzirise ma parameter akasiyana evatauri: wedzera huwandu hwemutauri wega wega, ita kuti vatauri vese vabereke zvakafanana ... maneja uye multimedia controller.
Maawa mashoma apfuura, iTunes Remote yakagamuchira nyowani nyowani, 4.3.1, mune chete iyo nhanho-mbiri yekusimbiswa. Kune avo vasingazive mashandiro anoita basa rekuchengetedza, zviri nyore kwazvo: kana uchipinda muchirongwa, isu tichafanirwa zvinoenderana nechigadzirwa kana nhamba yefoni kwatinozogashira password yekuverenga iyo yatinozofanira kupinda mukushandisa. Pane imwe nguva yakapinda uye yakasimbiswa, tichakwanisa kuwana zviri mukati me app.
Iko kuchengetedzwa pamwe neizvozvo kwemwedzi mishoma Apple iri kuunza akawanda ekushandisa kwayo izvo zvinobata neyakajeka zvemukati, senge iTunes Remote. Pasina mbiri-chinhu chechokwadi, mumwe munhu akabatana neiyo imwechete yeWi-Fi network anogona kuwana iTunes data kana yaimbofananidzwa neKugovana Kwemba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » iTunes Remote inogadziridzwa nekuwedzera kuvimbiswa kwezvinhu zviviri
Apple haina kumbobvira yave munzvimbo iri nani hama Samsung, sekureva kwemuongorori
Mutambo wemavhiki uno wepaApp Store unonzi Nightgate